“Liverpool horyaalka waa ay kuu guuleysanaysaa, wayna u qalantaa” – Wayne Rooney – Gool FM
“Liverpool horyaalka waa ay kuu guuleysanaysaa, wayna u qalantaa” – Wayne Rooney
(Liverpool) 22 Mar 2020. Halyeygii hore ee Manchester United, Wayne Rooney ayaa qiray in Liverpool ay mudan yihiin ku guuleysiga horyaalka Premier League-ga, inkastoo uu marmarka qaar ku fikiro inay u roonaan lahayd in xilli ciyaareedka guud ahaan la joojiyo.
Xiddiggii hore ee Everton ayaa The Times u sheegay in Liverpool ay u qalanto hanashada horyaalka Premier League.
“Hadda sidaad qiyaasi kartaan, waxaa ila soo xiriira taageerayaal Everton oo i leh ‘Xilli ciyaareedka waa in la joojiyo!’ Dabcan markaad tahay shaqsi Everton ah, sidoo kale Manchester United 13 sano u ciyaarayay, xoogaa waxaa jira dareen inay taas fiicnaan lahayd” ayuu Rooney ku hadaaqay.
“Balse maya. Liverpool cajiib ahayd, shaqo wacan ayay qabteen, weyna u qalmaan inay horyaalka ku guuleystaan, ma qiyaasi kartaa dad 30 sano sugayay horyaalka in qaab sidaan ah ay ku waayaan? Go’aankii ugu saxnaa ayaa la qaatay.” ayuu kabtanka Derby County ku tilmaamay in horyaalka dib loo billaabo.
Sidoo kale gooldhaliyaha ugu sarreeya Man United ayaa qaba in go’aanka uu horyaalka ku sii soconayo uu xal u yahay dagaalka kooxaha heerka labaad iyo kuwa boosaska Champions League-ga ay ku jiraan.